ဂပြနျဗီဇာ さむらい行政書士法人 immigration lawyer
ပထမ ဦး ဆုံးအကွိမျဖောကျသညျမြားအတှကျဖောကျသညျလိုငျး
အလုပ်ချိန်: ကြားရက် ၉:၀၀-၂၀:၀၀ / စနေတနင်္ဂနွေ ၉:၀၀-၁၈:၀၀ ※အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များကလွှဲ၍ ,၁၂/၃၀-၁/၃
အလုပ်ချိန် ：ကြားရက် ၉:၀၀-၂၀:၀၀
သုံးစှဲသူမြားသညျကြှနျုပျတို့အားရှေးခယျြသငျ့သညျ့အကွောငျးရငျး ၆ ခကျြ
ဆာမူရိုင်းရှေးခေတ်ဂျပန်စစ်သည်သူရဲကောင်းမျိုးပြည်တွင်းသို့လာရောက်နေထိုင်ခြင်းခိုင်မာသောဥပဒေမှာစီးပွားရေးတွင်အားသာသောအချက်များရှိသည်ထိုအချက်များသည်အောင်မြင်မှု့များ တန်ဖိုးနည်းဈေးနှုန်းဖြင့်ဝန်ဆောင်ပေးသည် မည်သည့်ကိစ္စများမှာမဆိုကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်နိုင်သောကျွမ်းကျင်သူများအများကြီးရှိသည် အခြားဥပဒေအဖွဲ့များနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါလူတစ်ဦးဆီလှုပ်ရှားပြီးကျွန်ုပ်တို့မှာကောင်းမွန်သောကျွမ်းကျင်သူများအတွေ့အကြုံနှင့်ဗဟုသုတ နှင့်မြန်ဆန်သောလုပ်ဆောင်မှု့ရှိသည်.
မှု့များနှင့်ဆက်စပ်ပြီး အသိမှတ်ပြုစီမံအုပ်ချုပ်ရေးရာတရားဝင်ကျွမ်းကျင်သူများအများကြီးရှိသည် သို့သော်ဗီဇာလျှောက်ထားမှု့ကျွမ်းကျင်မှု့နှင့်အာရုံစိုက်မှု့ကိုသာရှာဖွေရန်ဥပဒေသည်ခက်ခဲသည်ကျွန်ုပ်တို့ဥပဒေသည်ဗီဇာလျှောက်ထားမှုကိုအထူးလုပ်ဆောင်ပြီးအောင်မြင်မှု့နှင့်ဗဟုသုတများကိုအထူးပေးသ
ဥပဒေသည်ရှားပါးသောပြည်ဝင်ခွင့်ဥပဒေမှာနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ဗီဇာလျှောက်ထားမှုကိုအထူးပြုလုပ်ပေးပြီးနိုင်ငံသားလိုင်စင်ဖြင့်ကျွမ်းကျင်သောဝန်ထမ်းများရှိသည်ကျွန်ုပ်တို့ဥပဒေအဖွဲ့တွင်အဖွဲ့ဝင်၁၈ဦး အသိအမှတ်ပြုစီမံအုပ်ချုပ်ရေးရာတရားဝင်ကျွမ်းကျင်သူများ၈ဦး အကြို အသိအမှတ်ပြုစီမံအုပ်ချုပ်ရေးရာတရားဝင်ကျွမ်းကျင်သူများ၎ဦးနှင့်ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းပါဝင်သည်
လူအများစုသည်ဥပဒေရေးရာတွင်နိုင်ငံခြားသားဗီဇာလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံ နှင့်ဗဟုသုတရှိတယ်ဆိုတာမသေချာပါဘူ့း စားသောက်ဆိုင်တိုင်းသည်သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်စားသောက်ဆိုင်ကိုကောင်းမွန်ပြီးအရသာရှိတယ်လို့ကြော်ငြာသလိုနဲ့တူသည်ဥပဒေတွင်မတူညီကွဲပြားမှု့သည်သတ်မှတ်ရန်ခက်ခဲသည်.၀န်ဆောင်ခသည်ဥပဒေအဖွဲ့မှာမူတည်ပြီး ယန်း၅၀၀၀၀-၁၀၀၀၀၀ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်ကိုကျွမ်းကျင်ဝန်ဆောင်မှု့နှင့်သင့်တင့်သောဝန်ဆောင်ခဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်တိုက်တွန်းပေးသည်.ဥပဒေအနည်းငယ်မှာကျရှုံးမှု့ဝ.၁ရာခိုင်နှုန်းရှိနေစဉ်တွင်အကဲဖြတ်မှု့အောင်မြင်ရန်ဥပဒေအဖွဲ့အသစ်မှာကျဆုံးမှု့၏၂၀ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်.သိသိသာသာပဲ နောက်ဆုံးတစ်ခုမှာပို၍ကျွမ်းကျင်ပြီးအလုပ်အတွေ့အကြုံပိုကောင်းသည်.ဥပဒေအဖွဲ့၁၀၀တွင်၂ဖွဲ့၃ဖွဲ့သည်သာနောက်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ပြီးနောက်ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်မှန်ကန်သောအရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု့မရှိသောလူများအတွက်ထိုအရာသည်ခက်ခဲသည်.ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အလုပ်လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်ကိုမည်သည့်စိတ်ပျက်စရာများနှင့်မှချန်ထားမည်မဟုတ်ပ
4. ဆာမူရိုင်းရှေးခေတ်ဂျပန်စစ်သည်သူရဲကောင်းမျိုးပြည်တွင်းသို့လာရောက်နေထိုင်ခြင်းဥပဒေအဖွဲ့သည်အ ခြားအဖွဲ့ကိုကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းကိုလည်းသင်ကြားပေးသည်
ဆာမူရိုင်းရှေးခေတ်ဂျပန်စစ်သည်သူရဲကောင်းမျိုးပြည်တွင်းသို့လာရောက်နေထိုင်ခြင်းဥပဒေအဖွဲ့သည်ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ထိပ်ဆုံးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည်.့ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားအဖွဲ့များကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုအလုပ်နည်းလမ်းကိုသင်ပေးရန်မေးထားပြီးအခုကျွန်ုပ်တို့မှာနိုင်ငံတကာ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုစီမံအုပ်ချုပ်ရေးရာကျွမ်းကျင်သူများအတန်းနှင့်သင့်တင့်တဲ့ဗီဇာဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲဆိုတာ အခြားအဖွဲ့များကသင်ပေးသည်ပြီးနောက်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းအလုပ်တွင်မဆိုပြည်တွင်းသို့လာရောက်နေထိုင်ခြင်းကိုစေ့စပ်သေချာစွာကြည့်သည်ဥပဒေအဖွဲ့၂၀၀ခန့်သည်နည်းလမ်းကိုသင်ယူရန်လာရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာသည်.့ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားဥပဒေအဖွဲ့ကိုသင်ရန်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်.ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှု့ကိုရယူရန်တုံ့ဆိုင်းနှေးကွေးခြင်းကျေးဇူးပြု၍မရှိပါနှင့်.
ထိုရက်များတွင် ဥပဒေအဖွဲ့များသည်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီများကဲ့သို့ပြောင်းလဲမှု့ဈေးနှုန်းကိုသတ်မှတ်ထားသည်.အလုပ်အပ်သူတစ်ဦးသည်ပြောခဲ့သည်အဲ့တာကသူတို့သည်အံသြသွားရခြင်းသည်သူတို့အခြားဥပဒေအဖွဲ့ကိုသွားသောအခါဥပဒေအဖွဲ့သည်ထပ်တိုးအလုပ်အတွက်အပိုဝန်ဆောင်ခမပေးရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်.အချို့ ဥပဒေအဖွဲ့သည်သူတို့၏၀န်ဆောင်ခကိုမရှင်းလင်းရင်ကျွန်ုပ်တို့သင့်ကိုဥပဒေအဖွဲ့အသစ်ကိုအပြည့်ပါဝင်ပီးသောဈေးနှုန်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးရန်တိုက်တွန်းပေးသည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်းမှာစိတ်ပျက်စရာကိစ္စ ရှိရင် ကျွန်ုပ်တို့အပြည့်ငွေပြန်အမ်းပေးမည်.
Ueno ဋ္ဌာနချုပ်: Ueno ဘူတာရုံ မှ၅မိနစ်လမ်းလျှောက်ပါ
Shinjuku ဋ္ဌာနခွဲ: Shinjuku ဘူတာရုံ မှ၂မိနစ်လမ်းလျှောက်ပါ
Nagoya ဋ္ဌာနခွဲ: Nagoya ဘူတာရုံ မှ၎မိနစ်လမ်းလျှောက်ပါ
Osaka ဋ္ဌာနခွဲ: Osaka ဘူတာရုံ မှ၇မိနစ်လမ်းလျှောက်ပါ
သင်သည်ညဘက်အချိန်နှင်စနေတနင်္ဂနွေအလုပ်ချိန်အတွင်းဆက်သွယ်နိုင်သည် အလုပ်ချိန်: ကြားရက် ၉:၀၀-၂၀:၀၀ / စနေတနင်္ဂနွေ ၉:၀၀-၁၈:၀၀ ※အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များကလွှဲ၍ ,၁၂/၃၀-၁/၃
လျှောက်လွှာဖောင်များ ပြည်ဝင်ခွင့်နဲ့ဆက်စပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ၏ရည်ရွယ်ချက်များ စာရွက်စာတမ်းများကိုသင့်ကိုယ်စားဖိုင်တွဲပြီးကျွန်ုပ်တို့ဖိုင်တွဲပေးရလိမ့်မည်
အလုပ်များသောလူများအတွက်စနေတနင်္ဂနွေအပကြားရက်သာမက စနေတနင်္ဂနွေပိတ်ရက်နှင့်လူထုပိတ်ရက်များတွင်ရုံးဖွင့်သည် ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြံဥာဏ်ရယူမှု့အတွက်ကြိုတင်ဝန်ဆောင်မှု့ကိုရယူကတည်းကအကြံဥာဏ်ရယူမှု့အတွက်အချိန်အနည်းငယ်ရယူရန်သင့်ကိုတိုက်တွန်းသည်
ရုံးခန်းသည်အဆင်ပြေသင့်တော်သော ရုံးခန်းသည်အဆင်ပြေသင့်တော်သော Ueno ဘူတာရုံ, Shinjukuဘူတာရုံနှင့်,Nagoya ဘူတာရုံ , Osakaဘူတာရုံ ,ဧရိယာမှာတည်ရှိသည်
ရုံးခန်းသည်အဆင်ပြေသင့်တော်သော ရုံးခန်းအားလုံးသည် ဘူတာရုံပိတ်တဲ့အထိအဆင်ပြေသည်.တိုကျို
(Ueno/Shinjuku), မှာရုံး၎ရုံး Nagoya နှင့် Osaka
①　Ueno OfficeJR上野駅徒歩2分
အင်ဂျင်နီယာ လူသားရင်းမြစ်ကျွမ်းကျင်သူများ နိုင်ငံတကာဝန်ဆောင်မှု့ဗီဇာ
စီးပှားရေးစီမံခနျ့ခှဲမှုဗီဇာ / နိုငျငံခွားကုမ်ပဏီတညျထောငျခွငျး
ဂပြနျဗီဇာ | ပြည်တွင်းသို့လာရောက်နေထိုင်ခြင်းခိုင်မာသောဥပေ
Uenoရုံး : 東京都台東区上野7-4-7 VORT UENO 4階
Shinjyukuရုံး : 東京都新宿区歌舞伎町2-25-8EcoPlace新宿2階
Nagoyaရုံး : 愛知県名古屋市中村区則武2-3-2サンオフィス名古屋752
Osakရုံး : 大阪府大阪市北区梅田2-5-4千代田ビル西館8階